Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » पहिलाे पटक केटी हेर्न जाँदा -भुवनहरि सिग्देल
२०७७ माघ १३ गते मङ्गलबार
पहिलाे पटक केटी हेर्न जाँदा -भुवनहरि सिग्देल
२०७७ असोज १५ गते बिहिबार ०७:३८
पहिलो पटक केटी हेर्न जाँदा १२ वर्षको थिएँ । जेठा बाको छोरा मुरलीप्रसादले केटी देखाउन लाने भए । केटी उनकी मावली गाउँ चित्लाङ्की अरे । आमा चाहिँ राणाको दरबारमा भान्छे बाहुनी बसेकी रे । छोरी पनि आमासँग बसेकी । केटी हेर्न जानका लागि...
पहिलो पटक केटी हेर्न जाँदा १२ वर्षको थिएँ । जेठा बाको छोरा मुरलीप्रसादले केटी देखाउन लाने भए । केटी उनकी मावली गाउँ चित्लाङ्की अरे । आमा चाहिँ राणाको दरबारमा भान्छे बाहुनी बसेकी रे । छोरी पनि आमासँग बसेकी ।
केटी हेर्न जानका लागि आमोइले लुगा खोज्नुभयो । काने जुता तीन ठाउँमा बाङ्गिएका थिए । मोजा नाइँ । अब कमिज सरुवाल लगाएर मात्र कसरी जाने ? अरु मेरा लुगा केही पनि थिएनन् । तै तै घरमा बाको एउटा स्वीटर रहेछ जाली जस्तो बुनेको । आमोइले त्यही स्वीटर लगाइदिन थाल्नुभयो । बाउला एक वित्ता जति बाहिर निस्के । लम्वाई घुँडानेर पुग्यो । त्यसलाई मोडमाड पारेर कम्मरमा पटुका जस्तो पारिदिनुभयो । बाउला मोडेर नाडीमा फुकुन्डोजस्तो पारिदिनुभयो ।
मेरो टोपी त झुत्रे थियो । बाको माखा बुटे टोपी खोजेर ल्याउनुभयो । त्यसले दुवैतिरका कान सम्म छोप्थ्यो । यस्तो पोषाक भिरेर म पहिलोपटक दुलही हेर्न गएँ ।
हिँडेर आउनुपर्ने थानकोट पारीको दहचोकदेखि काठमाडौँसम्म फेरि बेलुका घर नपुगी नहुने । मोजा विनाको काने जुताले दुखाएर हिँड्नै सकिनँ । गोली गाँठामा घाउ जस्तै बनायो । सायद नैकापतिर आइपुगिएको थियो होला मैले जुता फुकालेर हातमा झुन्डाएँ । दाजु मुरलीप्रसादले भने, ‘ए काँधमा गलबन्दी पनि छैन के भन्लान् केटा ? ला बरु मेरै फेटा बेर ।’
दाजुले फेटा त दिए । फेरि उनका फेटा त घुँडाभन्दा तल आइपुग्ने । उनले अक्कल गरेर त्यो फेटा गर्धनमा फनफन बेरे । तैपनि दुइटा फुर्का लामा भए । त्यसलाई बेरबार बनाएर छातीमा घुसारिदिए । झलक्क हेर्दा म ११÷१२ वर्षका केटीजस्तो देखिएँ होला । छाती पुटुस्स देखिएकाले ।
यसरी हामी कालीमाटीतिर आइपुगेका थियौ होला । दाइले सोधे, ‘दुहली ल्याएपछि के गर्छस् बाबु ?’
मैले भने, ‘गुच्चा खेल्ने ।’ सिपाही पाराले जिस्काइहाले, ‘ह्या मोरा दुलही ल्याएर पनि गुच्चा खेल्ने हो ।’
मैले भने, ‘के गर्ने त दाइ ?’
उनले भने, ‘त्यो कुरा विवाह गरेको दिन तँलाई भन्दिउँला ।’
सायद, दरबार नजिकै थियो होला । दाइले जुता लगा भनेर हप्काए ।
‘त्यहाँ दरबारका मालिकसँग भेट हुन्छ । प्यारप्यार नबोल है ।’
निहुरिएर बिस्तारै बोल भने ।
त्यो दरबारमा पसियो । ढोकामा सिपाही उभिएको थियो । उसले के सोध्यो दाइले के भने थाहा भएन । त्यो सिपाहीले साथैमा लिएर भित्र गयो । लामो बरन्डा छेउपट्टि फलैचाजस्ता काठका बस्ने ठाउँ । ठाउँठाउँमा थिए । एउटा फलैचामा बसाल्यो । बसिरहनु भनेर उभित्र गयो । हामी टस्याकटुसुक बस्यौँ । बोलचाल छैन । दस मिनेट वितेको थियो होला । एकजना कुर्था सुरुवल लगाएको । छालाका चप्पल सेता लवेदा सुरुवल । कपाल मास्तिर तलासेको मानिस हामी भए तिर आयो । उसको पछिपछि एकजना हुक्का बोकेको सिपाही थियो । ऊ नजिकै आएपछि दाइले उठेर स्वति गरे । मलाई पनि चिमोटेर स्वति गर्न लगाए । त्यो महापुरुष हामी बसेको फलैचा अगाडि बस्यो । हुक्का बोक्नेले नली मालिकको मुखै नेर लगेर दियो । नली समाएर तीन पटक ट्ुर्रटुर्र हुक्का बजाए । हामीतिर हेरेर भनेर भने, ‘ए बज्यैकी छोरी हेर्न आएका हौ ।’
दाइले हो हजुर भने ।
मालिकले मतिर आँखा तानेर भने, ‘ए केटा कति वर्षका भयौ ?’
म लजाएर निहुँरिए । १२ वर्ष मात्रै भन्न सकेँ ।
‘पढेका छौ कि छैनौँ ?’
छु, रुद्री चण्डी, दुर्गा कवज पढ्न जानेको छु । मैले भनेँ । त्यो मालिकले फिस्स हाँसेर भने, लविदरे देखिन्छौ त ?
अघि हुक्का लिएर आउने सिपाही बगलमा उभिएको थियो । ऊ तिर फर्केर मालिकले भन्यो, ‘जा बज्यै र उसकी छोरीलाई बोलाएर ले ।’
सिपाही गयो । एकछिन पछि पर कुनामा एउटी अधवैँशे आइमाइ र केटी निकै पर उभिएको देखेँ । ती हाम्रा अगाडि आएनन् । सायद हेर्न आएका होलान् तर हाम्रा अगाडि आएनन् । सिपाहीले भन्यो, मैयाँ बज्यैको मारकेस छ अरे पन्छिएको दुई दिन भयो अरे ।
मालिक जुरुक्क उठ्यो । कुरा मिल्ला जस्तो भएन । दोल्ठायाङ खायो । ऊ त चप्पल बजाउँदै लरलर फर्कियो । दाइ र म जिल्लाराम ।
दाइले भने हाम्रो काम सकियो । मैले के ठानेर सोधेँ, ‘दाइ खै त केटी ?’
दाइले भने, सुनिनस केटी पन्छिएकी छे अरे । कुरोले पनि दोल्ठायाङ खायो अरे । यो केटी तेरा लागि जुर्ली जस्ती छैन । दाइले भन्यो, म यतिखेर सम्झन्छु । केटी पक्कै पनि १४ प्रन्ध वर्षकी हुनुपर्छ । पर सरी सकेकी । म १२ वर्षको छु । जुँगाको रेखी पनि बसेको छैन । मालिकले भन्यो दोल्ठायाङ खायो । दाइले भन्यो कुरा सकियो । साँझमा बल्ल घर पुगियो । आमोइले सोध्नुभयो, ‘केटी हेरेर आयौ कस्ती लागी ?’ म बोलिनँ दाइले भने, ‘कुरो त मिल्ला जस्तो छ । केटी नजिक आइन पन्छेकी रैछ । आमोईले भन्नुभयो, हैट सिपाहीको बुद्दि के को मिल्नु नि । तेरो भाइ १२ वर्षको छ ऊ चौध प्रन्ध वर्षकी थिई । मिल्ला त कुरो । त्यो हुलिया बनाएर पहिलो पटक केटी हेर्न गएको म । के केटी हेरेँ, कसरी हेरेँ । त्यो प्रसङ्स त्यसै सेलायो । दरबार बसेकी मैयाँ सँग मेरो विहे भएन । सम्झन्छु अहिले कहाँ होली ? जहाँ भएपछि भलो होस्् विचरीको ?
प्रकाशित मिति १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:३८
गजलकार निम्बाका दुई गजल
स्मृतिमा कर्णाली गजल उत्सव
देउडा गजल प्रतियोगिता हुने भएपछि गजलकार खुसी
गजलमा भोक बोल्ने गजलकार कुन्दन
मजदुरी गर्दै पढेका देव सजन बने सरकारी जागिरे भन्छन्, ‘उपसचिव बन्ने सपना छ ‘
बर्मामा बाबु त्रिपाठीको “बा” गजलसंग्रह पाठ्यक्रमको रुपमा पढाई भैरहेको छ
गजल – केशव शर्मा
शैक्षिक क्षेत्रका धरोहर : डा. बिस्टलाइ शुभकामना – हरिश कान्छो जोशी
मनोजका कवितामा सामाजिक वि’कृतिदेखि देश प्रेमसम्म
२०७७ माघ ८ गते बिहिबार ०६:४४
२०७७ माघ ८ गते बिहिबार ०३:२१
२०७७ माघ ६ गते मङ्गलबार ११:११
चुनौंतीको गर्भमा लुकेको अवसर।
२०७७ माघ ४ गते अाईतबार ०३:०८
ईमेल : timesmayur@gmail.com